SAWIRO:-Webiga Shabeelle oo fatahaado horleh sameeyey – Geelle Magazine
Home » Hirshabeelle Sawiro Wararka
SAWIRO:-Webiga Shabeelle oo fatahaado horleh sameeyey
caliahmed Posted On May 4, 2020
Webiga Shabeelle ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa uu fatahaado horleh ka sameeyey tuulooyin dhowr ah oo ka tirsan Gobolka Shabeellaha Dhexe, kuwaas oo qaarkood dadkii deganaa ay isaga barakaceen.
Tuulooyinka uu Webiga ka fatahay oo dhamaantood hoostaga Magaalada Jowhar ee Caasimadda Maamulka Hir-Shabeelle kuna yaalla Jiinka Webiga ayaa waxa ay kala yihiin Muriyaale, Lamawaab, Buulo Bishaar, Gaafaay, Timire, Magadley, Raqayle, Dayma Same, Raqayloow Buurdheere, Xaanshooley, Geedo Barkaan, Buur Fuule iyo Jowhar Soomaali.
Dhammaan deegaannadan uu fatahaada ka sameeyay Webiga Shabeelle ee hoostaga Magaalada Jowhar ayaa waxaa badi isaga barakacay dadkii danyarta ahaa ee deganaa, iyaga oo ka cabsi qaba in ay waxyeelo kasoo gaarto.
Mas’uuliyiinta ugu sareysa Maamulka Gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa dhawaan waxa ay booqdeen tuulooyinka qaar ee uu Webiga ka fatahay, iyaga oo ku baaqay in dadka iyo Madaxda Sare ee Hir-Shabeelle looga baahan yahay in ay ka hortagaan fatahaada Webiga.
Tuulooyin kale ee hoostaga Magaalada Jowhar ayaa laga cabsi qabaa inuu Webiga ka fataho, waxaana xusid mudan in dowladda Soomaaliya ay wafdi Injineero ah u dirtay Magaalada Beledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan oo ay ka taagan tahay cabsi la xiriirta fatahaad uu sameeyo Webiga Shabeelle.
Ciyaaryahan ka tirsan Kooxda Manchester United oo xadgudub sameeyey